भर्खरै विप्लव समुहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सरकारको पटके नियन्त्रणबाट मुक्त भई बाटो लागिसके । तर, तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता अच्चम मान्दै छन्, आखिर किन रामबहादुर थापा बादल प्रकाण्डको पछि यति हात धोएर लागेका होलान ?
तत्कालीन एमाले कार्यकर्ताले सोधे, किन ?
नत्र, तीन बर्षअघि प्रचण्डले वैद्यलाई रुपैयाँ दिँदा विप्वलालार्ई बोलाएर जानकारी दिएका थिए । तर, बादल बोलाईएनन् । वैद्यकहाँ पैसा पुगेपछि बल्ल बादलले चाल पाए । विप्वलले त्यसको आधा रकम आफुमार्फत खर्च हुनुपर्ने माग गरे ।
बादले बैद्यलाई नदिने भन्दै थिए, त्यहि दिनबाट हो, बादल र विप्वलवबीच चर्काचर्की परेको ।
पछि वैद्यले आफुसँग एक रुपैयाँ पनि नराखी आधा बादल र आधा विप्वलवलाई दिए ।
विप्वलव पैसा पाउनसाथ चीन गए ।
कसले बोलाएर गए ? यी केहि कुरा पार्टीमा भनेका थिएनन् । वैद्यले सोध्दा पनि साथीले बोलाएको मात्रै भने ।, आज प्रकाशित जनआस्थासाप्ताहिकमा यो खबर छ ।
Posted on October 3, 2018 Author Categories पत्रपत्रिकाबाट, मुख्य समाचार, राजनीति
Previous Previous post: बालुवाटारमा बगैंचा सिंगार्न ५ करोड, मुख्यसचिवको आवासमा साढे ४ करोड !
Next Next post: डिबालाको ह्याट्रिकमा युभेन्टसको लगातार दोस्रो जित